Yesu Kristo—Mesia Hene No Taa Yehowa Atɛntrenee Akyi | Bɛn
Yesu ‘De Atɛntrenee Asi Asase So’
1, 2. Bere bɛn na Yesu bo fuwii no, na dɛn ntia?
NÁ Yesu bo afuw yiye—na na ntease wom ankasa. Ebia ɛbɛyɛ wo den sɛ wubesusuw ne ho wɔ saa kwan no so, efisɛ na ɔyɛ onipa a odwo. (Mateo 21:5) Nokwarem no, odii ne ho so pɛpɛɛpɛ, efisɛ na n’abufuw no yɛ trenee de. * Nanso, dɛn na na ahyɛ ɔbarima a ɔpɛ asomdwoe yi abufuw saa? Nsisi ankasa.
2 Ná Yesu ani sɔ asɔrefie a ɛwɔ Yerusalem no. Wiase nyinaa no, na ɛno nkutoo ne ofie kronkron a wɔahyira so ama ne soro Agya no som. Ná Yudafo a wɔwɔ akyirikyiri nsase so no twa kwantenten bɛsom wɔ hɔ. Amanaman mufo a wosuro Onyankopɔn mpo baa asɔrefie hɔ, kɔɔ abangua a na wɔayi asi hɔ ama wɔn no so. Nanso, wɔ Yesu som adwuma no mfiase no, ɔkɔɔ asɔrefie hɔ kohuu biribi a ɛhaw adwene. Hwɛ, ná asɔrefie hɔ sen gua so! Ná aguadifo ne sikasesafo ahyɛ hɔ ma. Nanso, ntɛnkyea bɛn na na ɛwɔ hɔ? Wɔ saa nnipa yi ani so no, na wobu Onyankopɔn asɔrefie hɔ sɛ baabi a wodidi nkurɔfo ho—anaa wɔbɔ wɔn apoo mpo. Ɔkwan bɛn so na na ɛte saa?—Yohane 2:14.
3, 4. Adifudepɛ so a wɔnam sisii nkurɔfo bɛn na ɛkɔɔ so wɔ Yehowa fie, na dɛn na Yesu yɛe de siesiee asɛm no?
3 Ná nyamesom akannifo no ahyɛ sɛ dwetɛ sika pɔtee bi nkutoo na wobetumi de atua asɔrefie tow no. Ná ɛsɛ sɛ ahɔho no sesa wɔn sika na wonya saa dwetɛ sika no bi. Enti sikasesafo no de wɔn apon kosisii asɔrefie no mu pɛɛ, na na wogye sika biara a wɔsesa ho biribi. Na mfaso nso wɔ mmoa a na wɔtɔn wɔn no so paa. Ná ahɔho a wɔpɛ sɛ wɔbɔ afɔre no betumi atɔ nneɛma a wɔde bɔ afɔre no bi afi oguadini biara hɔ wɔ kurow no mu, nanso na asɔrefie hɔ mpanyimfo bɛka sɛ n’afɔrebɔde no mfata. Nanso, na wogye afɔrebɔde a wɔtɔ wɔ asɔrefie hɔ no ɔkwan biara so. Esiane sɛ nkurɔfo no nsa hyɛ aguadifo no anom nti, ɛtɔ mmere bi a na wɔde wɔn nneɛma no gye aboɔden. * Ná eyi sen aguadi bɔne. Ná ɛyɛ dwowtwa!
“Momfa eyinom mfi ha!”
4 Ná Yesu ntumi mmu n’ani ngu nsisi a ɛte saa so. Na eyi yɛ n’ankasa Agya fie! Ɔde hama yɛɛ mpire, na ɔpamoo anantwi ne nguan no fii asɔrefie hɔ. Afei ɔkɔɔ sikasesafo no so kaa wɔn apon butubutuwii. Yɛ sika no a etu petee fam wɔ abo nsɛwee no so no ho mfonini wɔ w’adwenem hwɛ! Ɔka kyerɛɛ wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no denneennen sɛ: “Momfa eyinom mfi ha!” (Yohane 2:15, 16) Ɛte sɛ nea obiara annya akokoduru ansɔre antia ɔbarima kokodurufo yi.
‘Ɔba no Te sɛ Agya no Ara’
5-7. (a) Ɔkwan bɛn so na asetra a Yesu nyae ansa na ɔrebɛyɛ ɔdesani no nyaa atɛntrenee ho adwene a ɔwɔ no so nkɛntɛnso, na dɛn na yɛnam ne nhwɛso no so betumi asua? (b) Ɔkwan bɛn so na Kristo ako atia ntɛnkyea a ɛfa Yehowa tumidi ne ne din ho no?
5 Nokwarem no, aguadifo no san bae. Bɛyɛ mfirihyia abiɛsa akyi no, Yesu dii nsisi koro no ara ho dwuma, na saa bere yi de, ɔfaa Yehowa ankasa nsɛm de kasa tiaa wɔn a na wɔayɛ Ne fie “adwowtwafo tu” no. (Mateo 21:13; Yeremia 7:11) Yiw, bere a Yesu hui sɛ wɔnam adifudepɛ so resisi nkurɔfo, na wɔregu Onyankopɔn asɔrefie no ho fĩ no, ɔtee nka sɛ N’agya ara pɛ. Na ɛnyɛ nwonwa! Ná Yesu soro Agya de mfirihyia ɔpepem pii a yennim ano na akyerɛkyerɛ no. Ne saa nti, na ɔwɔ atɛntrenee ho adwene a Yehowa wɔ no bi. Ɔbɛyɛɛ asɛm a wɔka no sɛ “Ɔba no te sɛ agya no ara” no ho nhwɛso ankasa. Enti sɛ yɛpɛ sɛ yehu sɛnea Yehowa su a ɛne atɛntrenee no te ankasa a, ɔkwan a eye sen biara a yebetumi afa so ayɛ saa ne sɛ yebesusuw Yesu Kristo nhwɛso no ho.—Yohane 14:9, 10.
6 Ná Ɔba a wɔwoo no koro no wɔ hɔ bere a Satan frɛɛ Yehowa Nyankopɔn ɔtorofo wɔ ɔkwan a ɛmfata so, na ɔmaa asɛm baa teɛ a Yehowa nniso teɛ ho no. Ntwiri bɛn ara ni! Ɔba no tee mpoa a Satan twaa no akyiri yi sɛ obiara nni hɔ a obefi ayamye ne ɔdɔ mu asom Yehowa no nso. Akyinnye biara nni ho sɛ atoro sobo yi maa Ɔba no dii yaw wɔ ne koma a ɛteɛ no mu. Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ n’ani gyei bere a ohui sɛ obedi dwuma titiriw de asiesie nneɛma no! (2 Korintofo 1:20) Ɔkwan bɛn so na na ɔbɛyɛ saa?
7 Sɛnea yesuae wɔ Ti 14 no, Yesu Kristo de sobo a Satan bɔɔ Yehowa abɔde wɔ wɔn mudi mu kura ho no ho mmuae a etwa to na edi mũ koraa mae. Yesu nam saayɛ so too fapem maa Yehowa tumidi ho a wɔbɛsan ne Ne din ho a wɔbɛtew koraa. Sɛ́ Yehowa Adwumayɛfo Panyin no, Yesu de Onyankopɔn atɛntrenee besi hɔ wɔ amansan nyinaa mu. (Asomafo no Nnwuma 5:31) N’asase so asetra daa Onyankopɔn atɛntrenee adi. Yehowa kaa ne ho asɛm sɛ: “Mede me honhom megu no so, na waka [atɛntrenee, NW] akyerɛ amanaman.” (Mateo 12:18) Ɔkwan bɛn so na Yesu maa saa nsɛm no baa mu?
Yesu Ma ‘Nea Atɛntrenee Kyerɛ’ Mu Da Hɔ
8-10. (a) Ɔkwan bɛn so na Yudafo nyamesom akannifo no atetesɛm hyɛɛ animtiaa a wobuu wɔn a wɔnyɛ Yudafo ne mmea no ho nkuran? (b) Ɔkwan bɛn so na mmara a wɔde ano ka no maa Yehowa Homeda mmara no bɛyɛɛ adesoa?
8 Yesu ani gyee Yehowa Mmara ho na ɔde bɔɔ ne bra. Nanso, ne bere so nyamesom akannifo no kyinkyim saa Mmara no de dii dwuma ɔkwammɔne so. Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Munnue, mo kyerɛwfo ne Farisifo, nyaatwomfo! Mugyaw mmara mu nea ɛsom bo no: atɛntrenee ne mmɔborohunu ne gyidi.’ (Mateo 23:23) Ɛda adi pefee sɛ, Onyankopɔn Mmara akyerɛkyerɛfo no amma ‘nea atɛntrenee kyerɛ’ no mu anna hɔ. Mmom no, na wɔrekata Onyankopɔn atɛntrenee so. Ɔkwan bɛn so? Susuw nhwɛso kakra bi ho hwɛ.
9 Yehowa ka kyerɛɛ ne nkurɔfo sɛ wɔntwe wɔn ho mfi aman a wɔsom abosom a atwa wɔn ho ahyia no ho. (1 Ahene 11:1, 2) Nanso, nyamesom akannifo bi a wɔyɛ katee hyɛɛ nkurɔfo no nkuran sɛ wommu wɔn a wɔnyɛ Yudafo no nyinaa animtiaa. Mmara yi wɔ Mishnah no mpo mu: “Ɛnsɛ sɛ yegyaw yɛn nantwi wɔ amanaman mufo ahɔhodan mu, efisɛ yesusuw sɛ wɔne mmoa da.” Ná adwemmɔne a ɛte saa a wɔwɔ wɔ wɔn a wɔnyɛ Yudafo nyinaa ho no nteɛ, na na ɛne Mose Mmara no nhyia koraa. (Leviticus 19:34) Mmara a nnipa ahyehyɛ foforo nso buu mmea animtiaa. Mmara a wɔde ano ka kyerɛ no kae sɛ, ɛnsɛ sɛ ɔbea nantew di ne kunu nkyɛnmu na mmom ɛsɛ sɛ odi n’akyi. Wɔbɔɔ ɔbarima kɔkɔ sɛ ɛnsɛ sɛ ɔne ɔbea kasa wɔ baguam, n’ankasa yere mpo. Te sɛ nkoa no, na wɔmma mmea nni adanse wɔ asɛnnibea. Ná mpae bi mpo wɔ hɔ a mmarima bɔ a na wɔda Onyankopɔn ase wɔ mu sɛ wɔnyɛ mmea.
10 Nyamesom akannifo no de mmara ne ahyɛde ahorow a nnipa ahyehyɛ pii kataa Onyankopɔn Mmara so. Sɛ nhwɛso no, Homeda mmara no baraa adwuma a wɔbɛyɛ no Homeda, na eyii saa da no sii hɔ maa ɔsom, honhom fam home, ne ahomegye. Nanso, Farisifo no maa saa mmara no yɛɛ adesoa. Wɔn ankasa fa too wɔn ho so kyerɛɛ ade pɔtee a ɛyɛ “adwuma.” Wɔkyerɛɛ nneɛma horow 39 a wɔfrɛɛ no adwuma, a na ebi ne otwa anaa ahayɔ. Saa nkyekyɛm yi maa nsɛmmisa pii sɔree. Sɛ obi kum sommɔre Homeda a, so na ɔreyɛ ha? Sɛ obi posaw awi ne nsa ma na ɔwe bere a ɔnam ne kwan a, so na ɔreyɛ otwa adwuma? Sɛ ɔsa obi yare a, so na ɔreyɛ adwuma? Wɔde ahyɛde ahorow a ɛyɛ hwanyann na ɛyɛ katee na ɛkyerɛkyerɛɛ nsɛmmisa a ɛtete saa no mu.
11, 12. Ɔkwan bɛn so na Yesu daa no adi sɛ ɔne Farisifo no nyɛ adwene wɔ atetesɛm a ɛne Kyerɛwnsɛm nhyia no ho?
11 Wɔ tebea a ɛte saa mu no, ɔkwan bɛn so na na Yesu bɛfa aboa nkurɔfo ma wɔate nea atɛntrenee kyerɛ no ase? Wɔ ne nkyerɛkyerɛ ne n’asetra nyinaa mu no, ɔne saa nyamesom akannifo no dii nsɛm akokoduru so. Nea edi kan no, susuw ne nkyerɛkyerɛ no bi ho hwɛ. Ɔkasa tiaa wɔn mmara ahorow a nnipa ahyehyɛ no sɛ: “Mode mo atetesɛm a mokyerɛ no sɛe Onyankopɔn asɛm no.”—Marko 7:13.
12 Yesu kyerɛkyerɛɛ mu denneennen sɛ Farisifo no adi mfomso wɔ Homeda mmara no ho—kyerɛ sɛ, na wɔnte nea saa mmara no kyerɛ ase ankasa. Ɔkyerɛkyerɛɛ mu sɛ, Mesia no yɛ “home da wura” ma enti ɔwɔ hokwan sɛ ɔsa nkurɔfo yare Homeda. (Mateo 12:8) Bere a ɔresi asɛm no so dua no, ɔsaa yare anwonwakwan so Homeda wɔ baguam. (Luka 6:7-10) Ná saa ayaresa no yɛ nea ɔbɛyɛ wɔ wiase nyinaa wɔ ne Mfirihyia Apem Nniso mu no ho nhwɛso kɛkɛ. Mfirihyia Apem no ankasa na ɛbɛyɛ Homeda kɛse no, bere a awiei koraa no, adesamma anokwafo nyinaa bɛhome afi mfirihyia ɔhaha pii a wɔde abrɛ wɔ bɔne ne owu nsam mu no.
13. Mmara bɛn na ɛnam adwuma a Kristo bɛyɛɛ asase so no so bae, na ɔkwan bɛn so na na ɛyɛ soronko wɔ nea na edi kan no ho?
13 Yesu maa nea atɛntrenee kyerɛ mu daa hɔ pefee nso efisɛ mmara foforo, “Kristo mmara,” no bae wɔ bere a owiee n’asase so som adwuma no. (Galatifo 6:2) Esiane sɛ na ɛnte sɛ mmara a edi kan, Mose Mmara no nti, nnyinasosɛm titiriw na ɛwɔ mmara foforo yi mu, na ɛnyɛ ahyɛde ahorow a wɔakyerɛw. Nanso, na ahyɛde ahorow bi a ɛyɛ tee wom. Yesu frɛɛ eyinom mu biako “ahyɛde foforo.” Yesu ka kyerɛɛ n’akyidifo sɛ wɔnnodɔ wɔn ho sɛnea ɔdɔɔ wɔn no. (Yohane 13:34, 35) Yiw, na ɛsɛ sɛ ahofama a efi ɔdɔ mu hyɛ wɔn a wɔde “Kristo mmara” tra ase no nyinaa agyirae.
Atɛntrenee Ho Nhwɛso
14, 15. Ɔkwan bɛn so na Yesu daa no adi sɛ onim baabi a n’ankasa tumi kodu, na dɛn nti na eyi ma yenya awerɛkyekye?
14 Yesu yɛɛ pii sen ɔdɔ a ɔbɛkyerɛkyerɛe. Ɔde “Kristo mmara” no bɔɔ ne bra. Ná ɛda adi wɔ n’asetram. Susuw akwan abiɛsa a Yesu nhwɛso maa nea atɛntrenee kyerɛ daa adi pefee no ho hwɛ.
15 Nea edi kan no, Yesu bɔɔ mmɔden sɛ ɔremmu atɛnkyea biara. Ebia woahu sɛ nea ɛma wobu ntɛnkyea pii ne bere a nnipa a wɔnyɛ pɛ yɛ ahantan na wɔyɛ ade tra baabi a ɛfata sɛ wɔyɛ ade kodu no. Yesu anyɛ saa. Bere bi, ɔbarima bi kɔɔ Yesu nkyɛn kɔkaa sɛ: “Kyerɛkyerɛfo, kasa kyerɛ me nua na ɔne me nkyɛ awunnyade.” Yesu buaa no dɛn? “Onipa, hena na ɔde me sii mo so sennifo anaa ɔdekyɛfo?” (Luka 12:13, 14) So ɛnyɛ nwonwa? Ná Yesu nimdeɛ, ne nhumu, ne ne tumi a Onyankopɔn de maa no no sen onipa biara de wɔ asase so; nanso, wamfa ne ho annye asɛm yi mu, efisɛ na wɔmmaa no tumi sɛ ɔnyɛ saa. Yesu abrɛ ne ho ase wɔ saa kwan yi so bere nyinaa, wɔ mfirihyia mpempem pii a ɔde traa ase ansa na ɔrebɛyɛ ɔdesani no mu mpo. (Yuda 9) Ɛka Yesu ho nsɛm pii sɛ ofi ahobrɛase mu de ne ho too Yehowa so sɛ ɔno na ɔnkyerɛ nea ɛteɛ.
16, 17. (a) Ɔkwan bɛn so na Yesu daa atɛntrenee adi wɔ Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpaka no mu? (b) Ɔkwan bɛn so na Yesu daa no adi sɛ mmɔborohunu wɔ atɛntrenee ho adwene a ɔwɔ no mu?
16 Nea ɛto so abien no, Yesu daa atɛntrenee adi wɔ sɛnea ɔkaa Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no mu. Wanyɛ nyiyim. Mmom no, ofii komam bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛkɔ nnipa ahorow nyinaa nkyɛn, sɛ́ wɔyɛ adefo anaa ahiafo. Nea ɛne no bɔ abira no, Farisifo no bɔɔ ahiafo mpapahwekwa no gui buu wɔn animtiaa frɛɛ wɔn ʽam-ha·ʼaʹrets, anaa “fam nnipa.” Yesu de akokoduru teɛɛ ntɛnkyea a ɛte saa no. Ɔnam asɛmpa no a ɔkyerɛkyerɛɛ nkurɔfo—anaa, bere a ɔne nkurɔfo didii, maa wɔn aduan, anaa onyan wɔn fii awufo mu mpo—no so kuraa Onyankopɔn a ɔpɛ sɛ ‘nnipa ahorow nyinaa’ te asɛm no bi no atɛntrenee mu. *—1 Timoteo 2:4.
17 Nea ɛto so abiɛsa no, na mmɔborohunu kɛse wɔ atɛntrenee ho adwene a Yesu kura no mu. Ɔbɔɔ mmɔden boaa abɔnefo. (Mateo 9:11-13) Ɔyɛɛ ntɛm boaa nkurɔfo a na wonni tumi a wɔde bɛbɔ wɔn ho ban no. Sɛ nhwɛso no, Yesu ne nyamesom akannifo no anyɛ adwene wɔ Amanaman mufo nyinaa mu ahotoso a na wonni no ho, na wanhyɛ ho nkuran. Ɛwom sɛ Yudafo titiriw nti na wɔsomaa no de, nanso ofii mmɔborohunu mu boaa wɔn mu bi kyerɛkyerɛɛ wɔn. Ɔpenee so saa yare anwonwakwan so maa Romani sraani panyin bi, na ɔkae sɛ: “Israel mu mpo minhuu gyidi kɛse a ɛte sɛɛ pɛn.”—Mateo 8:5-13.
18, 19. (a) Akwan bɛn so na Yesu hyɛɛ nidi a wɔde bɛma mmea ho nkuran? (b) Ɔkwan bɛn so na Yesu nhwɛso no boa yɛn ma yehu abusuabɔ a ɛda akokoduru ne atɛntrenee ntam?
18 Saa ara na Yesu ne wɔn anyɛ adwene wɔ adwenhorow a na wɔwɔ wɔ mmea ho saa bere no ho. Mmom no, ofii akokoduru mu yɛɛ nea ɛteɛ. Ná wobu Samariafo mmea sɛ Amanaman mufo a wɔn ho ntew. Nanso, Yesu antwentwɛn ne nan ase sɛ ɔbɛka asɛm no akyerɛ Samariani bea no wɔ Sikar abura no ho. Nokwarem no, ɔbea yi na Yesu dii kan daa ne ho adi pefee kyerɛɛ no sɛ ɔne Mesia a wɔahyɛ ne ho bɔ no. (Yohane 4:6, 25, 26) Farisifo no kae sɛ ɛnsɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ mmea Onyankopɔn Mmara, nanso Yesu de ne bere ne n’ahoɔden pii kyerɛkyerɛɛ mmea. (Luka 10:38-42) Na bere a na atetesɛm kyerɛ sɛ wontumi mfa wɔn ho nto mmea adanse so no, Yesu dii mmea pii ni ma wɔyɛɛ wɔn a wonyaa hokwan dii kan huu no wɔ ne wusɔre akyi. Ɔka kyerɛɛ wɔn mpo sɛ wɔnkɔka asɛm a ɛho hia sen biara yi nkyerɛ n’asuafo mmarima no!—Mateo 28:1-10.
19 Yiw, Yesu maa nea atɛntrenee kyerɛ mu daa hɔ maa amanaman no. Ɔde ne nkwa too asiane kɛse mu yɛɛ saa mpɛn pii. Yesu nhwɛso boa yɛn ma yehu sɛ egye akokoduru na ama obi atumi akura atɛntrenee ankasa mu. Ɛfata sɛ wɔfrɛɛ no “Yuda abusuakuw mu gyata no.” (Adiyisɛm 5:5) Kae sɛ gyata yɛ akokoduru a wɔde bu atɛntrenee ho sɛnkyerɛnne. Nanso, ɛrenkyɛ na Yesu de atɛntrenee a ɛsen saa aba. Ɔde ‘atɛntrenee’ besi asase so koraa.—Yesaia 42:4.
Mesia Hene no De ‘Atɛntrenee Si Asase So’
20, 21. Wɔ yɛn bere yi mu no, ɔkwan bɛn so na Mesia Hene no ahyɛ atɛntrenee ho nkuran wɔ asase so ne Kristofo asafo no mu?
20 Efi bere a Yesu bɛyɛɛ Mesia Hene wɔ afe 1914 no, wahyɛ atɛntrenee ho nkuran wɔ asase so. Ɔkwan bɛn so? Wama ne nkɔmhyɛ a ɛwɔ Mateo 24:14 no anya ne mmamu. Yesu akyidifo a wɔwɔ asase so no akyerɛkyerɛ nnipa a wɔwɔ nsase nyinaa so Yehowa Ahenni ho nokwasɛm no. Te sɛ Yesu no, wɔaka asɛm no wɔ ɔkwan a ɛteɛ na animhwɛ nnim so, na wɔhwehwɛ sɛ wɔma obiara—abofra anaa ɔpanyin, ɔdefo anaa ohiani, ɔbarima anaa ɔbea—nya hokwan hu Yehowa, atɛntrenee Nyankopɔn no.
21 Yesu rehyɛ atɛntrenee ho nkuran wɔ Kristofo asafo a ɔyɛ Ti no mu nso. Sɛnea wɔhyɛɛ nkɔm no, wama ‘nnipa mu akyɛde,’ Kristofo mpanyimfo anokwafo a wodi asafo no anim. (Efesofo 4:8-12) Bere a mmarima a wɔte sɛɛ yɛn Onyankopɔn nguan a wɔsom bo no, wodi Yesu Kristo a ɔhyɛ atɛntrenee ho nkuran no nhwɛso akyi. Wɔma ɛtra wɔn adwenem bere nyinaa sɛ Yesu pɛ sɛ wɔne ne nguan di no trenee mu—a wɔn dibea, wɔn din, anaa wɔn honam fam nneɛma a wɔwɔ mfa ho.
22. Yehowa te nka dɛn wɔ ntɛnkyea a abu so wɔ nnɛ wiase mu no ho, na dɛn na wapaw ne Ba no sɛ ɔnyɛ wɔ ho?
22 Nanso, Yesu de atɛntrenee besi asase so wɔ ɔkwan a ɛso bi mmae da so nnansa yi ara. Ntɛnkyea abu so wɔ wiase a aporɔw yi mu. Abofra biara a ɔkɔm kum no fi ntɛnkyea a anoyi biara nni ho, titiriw sɛ yesusuw sika ne bere a wogye de yɛ akode ne nneɛma a wɔn a wɔpɛ pɛsɛmenkominya anigye hwehwɛ de agye wɔn ani a wɔyɛ ma wɔn no ho a. Nnipa ɔpepem pii a wowuwu afe biara a anka enhia sɛ wowu no yɛ ntɛnkyea pii a ɛwɔ hɔ a ne nyinaa ma Yehowa fa abufuw trenee so no mu biako pɛ. Wapaw ne Ba no sɛ ɔnko ntia nneɛma nhyehyɛe bɔne yi nyinaa trenee so, na ɔmfa nyi ntɛnkyea mfi hɔ korakora.—Adiyisɛm 16:14, 16; 19:11-15.
23. Harmagedon akyi no, ɔkwan bɛn so na Kristo bɛhyɛ atɛntrenee ho nkuran akosi daa?
23 Nanso, Yehowa atɛntrenee hwehwɛ pii sen sɛe a wɔbɛsɛe abɔnefo kɛkɛ. Wapaw ne Ba no nso sɛ onni tumi sɛ “Asomdwoe-hene.” Wɔ Harmagedon ko no akyi no, Yesu nniso no de asomdwoe bɛba asase nyinaa so, na obedi ade ‘atɛntrenee so.’ (Yesaia 9:6, 7) Afei ɛbɛyɛ Yesu anigye sɛ obeyi ntɛnkyea a ɛde ahohia ne amanehunu pii aba wiase no nyinaa afi hɔ. Obekura Yehowa atɛntrenee a ɛyɛ pɛ no mu akosi daa. Ɛnde, ɛho hia sɛ yesuasua Yehowa atɛntrenee nnɛ. Ma yɛnhwɛ ɔkwan a yebetumi afa so ayɛ saa.
^ nky. 1 Bere a Yesu daa abufuw adi trenee so no, na ɔte sɛ Yehowa a abɔnefosɛm nyinaa ho “abufuw ayɛ no ma” no. (Nahum 1:2) Sɛ nhwɛso no, bere a Yehowa ka kyerɛɛ ne nkurɔfo asoɔdenfo no sɛ wɔayɛ ne fie “adwowtwafo tũ” wiei no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wobehwie m’abufuw ne m’aboɔhyew agu ɛha yi.”—Yeremia 7:11, 20.
^ nky. 3 Sɛnea Mishnah kyerɛ no, mfe bi akyi no, wɔsɔre tiaa mmorɔnoma a na wɔtɔn no aboɔden wɔ asɔrefie hɔ no. Wɔtew ɛbo no so bɛyɛ ɔha mu nkyem 99 ntɛm ara! Henanom na wonyaa mfaso kɛse wɔ aguadi a na sika wom yi mu? Abakɔsɛm akyerɛwfo bi kyerɛ sɛ na asɔrefie hɔ gua no yɛ Ɔsɔfo Panyin Hana fiefo dea, na ɛmaa asɔfo abusua no nyaa wɔn ho.—Yohane 18:13.
^ nky. 16 Na Farisifo no adwene ne sɛ “wɔadome” mpapahwekwa a wonnim Mmara no. (Yohane 7:49) Wɔkae sɛ ɛnsɛ sɛ obi kyerɛkyerɛ nnipa a wɔte saa no, anaasɛ ɔne wɔn yɛ adwuma anaa ɔne wɔn didi anaa ɔne wɔn bɔ mpae. Ná ɛyɛ bɔne kɛse sɛ obi bɛma ne babea aware wɔn mu bi sen sɛ ɔde no bɛma nkekaboa. Na wosusuw sɛ ɛnsɛ sɛ mpapahwekwa a wɔte saa no nya owusɔre ho anidaso.
Dwom 45:1-7 Dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Mesia Hene no bɛhyɛ atɛntrenee a ɛyɛ pɛ ho nkuran?
Mateo 12:19-21 Sɛnea nkɔmhyɛ kyerɛ no, ɔkwan bɛn so na Mesia no ne mpapahwekwa bedi?
Mateo 18:21-35 Ɔkwan bɛn so na Yesu kyerɛkyerɛe sɛ mmɔborohunu wɔ nokware atɛntrenee mu?
Luka 6:27-38 Ɔkwan bɛn so na Yesu daa no adi sɛ Onyankopɔn atɛntrenee susuw onipa nsɛm tebea ho?
Yɛbɛyɛ dɛn anya Ahenni a wɔde asi hɔ no so mfaso? Hwɛ sɛnea Ɔhene Mesia tew n’asomfo ho, ɔtete wɔn na osiesie wɔn.